Gadzira mifananidzo ye3D uye uvake maguta nemaapplication maviri emahara | IPhone nhau
Gadzira mifananidzo ye3D uye uvake maguta nemaapplication maviri emahara
Mazuva mashoma apfuura isu hatina kukuzivisa iwe nezvekushandisa izvo zvakakodzera kurodha mahara. Pachiitiko ichi, patinenge tine Mugovera masikati uye rese reSvondo riri pamberi, ndiri kuzokuratidza mafomu maviri atichakwanisa kugadzira mifananidzo ye3D, pamwe nekushandisa Anim8: 3D Hunhu Hwakasikwa Yakagadzirwa Nyore, chishandiso chine mutengo wenguva dzose we4,99 euros y Blox 3D Guta Musiki, chishandiso chine mutengo muApp Store ye2,99 euros. Tinogona kurodha maapplication ese emahara kwenguva yakati rebei.
1 Anim8: 3D Hunhu Hwakasikwa Hwakagadzirwa Nyore
2 Blox 3D Guta Musiki
Anim8 inotibvumidza kuti tigadzire mifananidzo yevatambi, mhuka kana zvinhu mu 3D nenzira yakajeka uye yakapusa. Kuburikidza nematanho mashanu akareruka uye nekutenda kune yakapusa interface, isu tichakwanisa kugadzira mafaflows ekuti tikwanise kugadzira mifananidzo nekukurumidza uye pasina kunetsekana. Kutenda nekushandiswa kwepepa reanyanisi, isu tinokwanisa kuronga kuti chii chichava kufamba uko chinhu chedu, mhuka kana munhu anofanira kutevera kuitira kuti mhedzisiro yacho inyorovese sezvinobvira. Anim8: 3D inotibvumidza kugovana zvisikwa zvedu zvese mumavhidhiyo fomati kuburikidza neFacebook, YouTube uye Twitter.
Kunyangwe ichi chishandiso chakaitirwa vana vari pakati pemakore matanhatu neasere ekuberekwa, vakwegura vanogona zvakare kunakidzwa nechishandiso ichi chatingaite nyore kugadzira maguta nemadhorobha. Kana tangogadzira zvivakwa, yave nguva yekutanga kuwedzera mota, marori, mabhazi, ndege, maherikoputa, zvikepe ... Chishandiso ichi chakagadzirirwa kusimudzira zviitiko zvevana nekupa maawa anovimbiswa ekufara. MuBlobx 3D Guta Musiki denga ndiro muganho, sezvo tichigona kugadzira kubva kumataundi madiki kusvika kumaguta makuru. Uye zvakare, isu tinogona zvakare kushandura iyo nguva yezuva kuti tichinje magetsi uye tigadzire nharaunda dzehusiku, nemvura ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Gadzira mifananidzo ye3D uye uvake maguta nemaapplication maviri emahara
Iyo iPhone 8 ine kamera yakavakirwa muiyo logo, unogona kuzvifungidzira?
Chitoro chitsva cheApple muBelgium? Ivo vanogona kunge vachivaka imwe muBruges